ILeopards isixoshe umqeqeshi osanda kubukisa ngeBucs - Impempe
ILeopards isixoshe umqeqeshi osanda kubukisa ngeBucs
Cishe ukushaya i-Orlando Pirates ngo 2-0 esikhathini esingangesonto esedlule kwamjabulisa ngokweqile umqeqeshi weBlack Leopards, uDylan Kerr (osesithombeni) waze walibala wukuthi kuneminye imidlalo okumele ayiwine nayo.
Kusukela iLeopards yadla iBucs, ayikaze yawina yize imidlalo yayo ebilandela ibisekhaya nayo, futhi idlala namaqembu abengekho efomini etheni.
ILidoda Duvha ishaywe yiCape Town City ngo 2-0 maphakathi neviki elidlule, yaphinda yathola isibhaxu esinzima sika 3-0 kwiChippa United ngempelasonto.
Empeleni nje, emidlweni emihlanu edlule leli qembu laseVenda liwine owodwa, ladlala ngokulingana kowodwa lane selihlulwa kwemithathu.
Lokhu kusho ukuthi emaphuzwini angu-15 ebelingawawola, liqoqe amane kuphela okulishiya lisendaweni ebucayi kuligi. Njengamanje leli qembu lisendaweni ka-15, kanti linamaphuzu ayisishiyagalolunye eliwaqoqe emidlaweni engu-13.
Cishe lokhu kube yisizathu esesenze abaphathi beqembu banquma ukuba bamdedele lo mqeqeshi odabuka eBritain.
“IBlack Leopards nomqeqeshi uDylan Kerr sebevumelene ngokwehukana ngesihle,” sifundeka kanje isitatimende esikhishwe yiqembu.
“Abebekade bengabasizi bakhe (uKerr), oMorgan Shivambu noLehlohonolo Seema ngokubambisana nomqeqeshi wonozinti, uSam Banda yibona abazobamba izintambo zokuqeqesha okwamanje” kuqhuba lesi sitatimende.
ILeopards inomdlalo onzima weDStv Premiership njengoba izobhekana neMamelodi Sundowns ekhaya eThohoyandou Stadium ngoLwesithathu ngo 5 ntambama.
Previous Previous post: Uselobizela amanye amagoli uLekay ngemuva kokulishaya kwiMaritzburg
Next Next post: ‘Ngiyaziqhenya ngabafana bami,’ kusho umqeqeshi weThe Citizens